novembre | 2009 | Zouboon
ORINASA SANCA BOANAMARY
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 2:18
Resa-be ao amin’ny tanan’i Boanamary mandrak’ankehitriny ny mikasika ity orionasa atao hoe SANCA na Société Anonyme Nouvelle Cimenterie d’Amboanio ity. Araka izay anarany izay dia orinasa iray mpamokatra simenitra izy ity. Raha ny tantara no zohina dia tamin’ny taona 2004 no nikatona ny orinasa noho ny antony maro samihafa raha tamin,’ny taona 1930 no nijoroany. Tamin izay fotoana izay dia voatery tsy maintsy najanona tamin’ny asany daholo ireo mpiasa rehetra efa mananika ny 630. Izay eo ihany fa ny tena nampitaraina ireo mpiasa tamin’izany fotoana izany ary mbola mampitaraina azy ireo ihany hatramin’izao dia ny vola noraisin’izy ireo tamin’ny fotoana nandroasana azy. “Tsy nifanaraka velively tamin’ny vola heverinay fa tokony horaisina ny vola nomena anay tamin’izany” hoy andriamatoa Zafimahaleo Jean-Claude, pointeur tao amin’ny service contrôle tao amin’ity orinasa ity. Nandritra ny 10 taona izy no nitana izany toerana izany. Tsy i Jean-Claude irery ihany anefa no sahy maneho izany hevitra izany fa miara-miombon-kevitra aminy daholo ny ankamaroan’ireo mpiasa rehetra voaroaka tao amin’ity orinasa ity. “Voahosihosy mihitsy ny zon’ny mpiasa satria dia tena nararaotina tanteraka izahay” hoy indray Rakotovao François nanohina ny hevitr’i Jean-Claude. Ny zava-nisy mantsy dia ity, maro tamin’ireo mpiasa tao no efa ampolo-taona maro no niasa tao nefa dia zara raha nahazo ambim-bava kely noraisina tamin’izany. Raha i François no resahina dia nandritra 25 taona izy no niasa tao amin’ny SANCA. Responsible des services éléctricité no asany tao nefa dia vola Ar 2 400 000 no noraisiny tamin’ny nandehanany. Marihina anefa fa tafiditra ho isan’ny cadre mihitsy izy tamin’izany raha araka ny fanazavany. Etsy andaniny anefa ny an’i Jean-claude dia vola Ar 300 000 ihany no noraisiny tamin’ny nandroahana azy nandritra ny fe-potoana niasany tao. Tsy izay ihany anefa fa ny tena mahatsikaiky dia ity, araka ny nambaran’i Zafimahaleo Jean-Claude ihany dia nilaza izy fa: “Nisy tamin’ny mpiasa niasa tao amin’ny SANCA nandritra ny 35 taona manijitra dia zara raha nandray vola Ar100 000 na Ar 200 000 fotsiny ihany tamin’ny nandroahana azy hiala tao amin’ny orinasa”. Asa aloha izay tena fahamarinan’izany toe-javatra izany fa mahavelom-panontaniana ihany izany. Araka ny fomba fanazavan’ireo mpiasa taminay dia tafiditra ao anatin’izany vola nomena azy ireo izany daholo: voalohany, ny préavis arakaraka ny andraikitra nosahanina tao amin’ny orinasa. 10 andro isaky ny taona nijanonana tao amin’ny orinasa tsy mihoatra ny 18 taona, ary farany ny tambikarama tamin’ny volana niasana farany, arakaraka ny pointage natao. Ireo rehetra ireo mitambatra izany no nanome ny sandam-bola nomena ny vatan’ny mpiasa tsirairay tao amin’ity orinasa ity. Raha ny fitarainan’ireo mpiasa no jerena dia nisy zavatra tsy nipetraka araka ny tokony ho izy ihany tao amin’ity orinasa ity, ara-dalana anefa izany rehetra izany eo anatrehan’ny fitsarana.
Nampiakarina tribonaly ny raharaha
Rehefa nahatsapa fa voahitsakitsaka ny zony dia tsy niraviravy tanana ihany ireo mpiasa fa tonga dia nampiakatra avy hatrany ny raharaha teny amin’ny tribonaly. Taoriana kely ny nanomezana azy ireo ny vola ny aprily 2004, dia nitory teny amin’ny tribony avy hatrany izy ireo. Vokany, nahazo rariny tamin’ny fitsarana ny orinasa. Mazava ho azy tsy faly tamin’izany ny ankamaroan’ny mpiasa ka ao ny milaza fa “atody niady amam-bato izahay tamin’izany” hoy izy ireo,“ka tsy mahagaga raha resy izay teny amin’ny tribonaly” hoy ihany izy ireo nanohy. Tsy midika anefa izany fa manakiana ny fitsarana misy izy ireo, saingy nihevitra kosa ireo mpiasa fa nanana ny rariny izy tamin’izany ka diso fanantenana. Raha zohina ny tantara dia nanomboka ny volana May taona 2003 no tafiditra tao anatin’ny chômage technique ny SANCA. Rehefa tonga kosa ny aprily 2004 dia nakatona tamin’ny fomba ofisialy ny orinasa. Mbola nisy mpiasa ihany nefa tao fa tamin’ny taona 2005 indray vao nisy fandroahana mpiasa noho ny antony “suppression de poste”. Nandalo fotoana maro ity orinasa ity talohan’ny nitsaharany izao ary tena isany namapalaza an’ny tananan’Amboanio Boanamary tokoa izany. CCM na company de Cimenterie Malgache no anarana niandohan’ny orinasa. Avy dia lasa NCA na Nouvelle Cimenterie d’Amboanio izy dia izao lasa SANCA izao indray. Raha tombatombanana dia efa 69 taona izao no nijoyoan’ny orinasa. Marihina fa mbola misy mpiasa miasa ao amin’ity orinasa ity mandrak’ankehitriny, izay mbola mahazo tambikarama feno avy amin’ny SANCA ihany.
40 KM VAO MI-CHARGES TELEPHONE
Hafakely indray ny fiainan’ny mponina ao amin’ny fokontany Ambatomalama ao Boanamary ity. Noho ny tsy fisian’ny herinaratra ao amin’ny tanana ity dia voatery alefa eny amin’ny toerana misy izany mihitsy aloha ny findray na ny telephone rehefa mila chargé-na. Raha ny fitantaran’ireo mponina dia ao no mandefa any Boanamary izay tsy dia lavitra lotra ny tanana nefa indraindray ihany vao mandeha ny herinaratra, ny ankamaroany kosa dia mandefa aty Mahajanga mihitsy mandefa ny finday ho-charge-na. Eo amin’ny 40 km eo mihitsy anefa ny elanelana misy amin’ireo tanana roa ireo. Ny tompony kosa tsy mampiasa finday mihitsy raha tsy vita izany. Indroa isan-kerinandro raha amin’ny anakapobeny no mandehfa ny findainy hi-charges ireo manana finday.